Yenza okuhlukile ungaluthwa yimititilizo kaDisemba | News24
Yenza okuhlukile ungaluthwa yimititilizo kaDisemba
eThekwini - Siphelile isikhathi sokuphindaphinda iphutha elilodwa njalo ngonyaka. Wonga imali unyaka wonke, kufike uDisemba uyibhubhudle, kuqale uJanuwari usumpunga yindlala.
Kulawa masonto ambalwa asele kuDisemba kunamaholidi abaluleke kakhulu kodwa, ungamuvi wukuluthwa yimititilizo yesikhashana.
Izindlela zokonga imali”
Uma ungumuntu owakashela emakhaya ngamaholidi, qinisekisa ukuthi uhamba usuyithengile igiloza yonke ephelele, wawukhokhela nogesi (ngisho ungasawufakanga, kodwa wuthenge uwushiye, kuzokusiza uma usubuya.)
Uma uzohamba uye emakhaya ungakaholi, Thenga ivawusha uma usuholile (zonke izitolo sezinawo amavawusha, Thenga noma eka-R500 ozoyisebenzisela ukuthenga ukudla uma usubuya).
OLUNYE UDABA:Kuzonandisa noMaskandi emcimbini kaKhisimusi
Shiya imali yokugibela noma ekaphethiloli, ungahambi nayo yonke imali (abanye abantu bayaye bazithumelele imali ngohlelo lweMoneyMarket bese bayayiyeka bengayikhiphi ukwenzala ukuthi bayikhiphe sekuqala unyaka).
Sebenzisa imali yebhonasi noma iholo likaDisemba ukukhokha esikoleni futhi ukhokhele nomalume ugcine iziliphu zenzele ukuthi ingane ingabi nenkinga uma isibuyela esikoleni.
Okusizayo kulezi zinsuku ukonga imali uma usemakhaya, wukuziphathela iziphuzo zakho. Kuyaziwa ukuthi abantu bayabuthanda utshwala, ngakhoke zenzele lula ngokuziphathela isitoko sakho.
Thenga amabhodlela owadingayo, ufake neziphuzo ku-coolerbox, ungcebeleke, ngisho noma ngabe awubuphuzi utshwala, phatha udilinki nojusi wezingane owanele. Ngele ndlela uzogwema ukwehla wenyuka ulokhu uyothenga.